Malunga nathi - TIANJIN CHENG YANG INDUSTRIAL CO., LTD
I-Tianjin Chengyang Industrial Co, Ltd.
Sisebenza ngezinto zobushushu eziphezulu.
Tianjin Chengyang Industrial Co., Ltd. ise kwisixeko izibuko Tianjin kumantla China. Inkampani yethu egubungela indawo engama-32000 sqm, enabasebenzi abangaphezulu kwama-200 kunye nexabiso lonyaka elingaphezulu kwezigidi ezili-15 ze-yuan. Inkampani inezixhobo zemveliso ehambele phambili kwaye ngoku ixhotyiswe ngaphezulu kwe-120 ye-shuttleless rapier looms, oomatshini abathathu bokudaya ilaphu, oomatshini be-4 aluminium foil edibanisa oomatshini, kunye nomgca omnye wokuvelisa ilaphu. Sisebenza ngezinto zobushushu eziphezulu. Inkampani yethu iyabandakanyeka kwilaphu le-fiberglass, i-PU camera ilaphu le-fiberglass, ilaphu yeglasi ye-Teflon, ilaphu elenziwe nge-aluminium, ilaphu elingenamlilo, ingubo yokuwelda, ilaphu leglasi, elisetyenziswa ikakhulu kulwakhiwo, ukuthuthwa, i-elektroniki, ishishini lamachiza, ukhuselo lokusingqongileyo, ukhuseleko lwesizwe namanye amashishini. Ukuzinikezela kulawulo olungqongqo lomgangatho kunye nenkonzo yabathengi enolwazelelelo, abasebenzi bethu abanamava bahlala bekhona ukuxoxa ngeemfuno zakho kunye nokuqinisekisa ukoneliseka ngokupheleleyo kwabathengi. Iimveliso zethu azithengisi kuphela kuzo zonke iidolophu nakumaphondo ajikeleze i-China kodwa zathengiswa kwihlabathi liphela, njengeMelika, iOstreliya, iKhanada, iJapan, iIndiya, uMzantsi Korea, iHolland, iNorway, iSingapore njalo njalo.
Inkampani yethu inamandla obuchwephesha, umgangatho ophezulu, ukubonelelwa kwangexesha, inkonzo elungileyo emva kokuthengisa, igama eliphezulu, inkampani "eqhubekayo, engqongqo, enokwenene, enobuchule" bomoya. . Ukulungiswa konikezelo lwezinto ezingavunyelwanga kwifektri yokuqala, ukwamkelwa kobugcisa obuphambili kwimveliso yodidi lokuqala yomsebenzisi kunye nenkonzo egqibeleleyo. Inkampani izimisele ukusebenzisana noninzi lwabasebenzisi kunye nabantu abanengqiqo. Injongo yethu kukudala ixabiso kubathengi, sijonge phambili kwintsebenziswano nawe!
Umatshini we-Silicon fiberglass
Sizama ukubonelela abathengi ngenkonzo engxamisekileyo kunye nokuhanjiswa kwangexesha. Sineqela lokuthengisa eliqinisekileyo lokuqinisekisa ukugqibelela kunye nabathengi. Unxibelelwano kunye nenkonzo elungileyo; Samkela OEM kunye ODM odolo. Singabanceda abathengi ukuba bakhe uhlobo lwabo lokushicilela ukusuka kubukhulu, ubude, umbala kunye nokupakishwa kwemveliso; sineminyaka emininzi yamava okuthumela ngaphandle, sinokunceda abathengi basombulule ezothutho kunye nezinye ezininzi ngokweengxaki. Nokuba ukhetha imveliso yangoku kwikhathalogu yethu okanye ufuna uncedo lobunjineli kwisicelo sakho, ungathetha neziko lethu lenkonzo yabathengi.
Ingubo ye-Acrylic Fiberglass, Ingubo yeAlglised fiberglass, Acrylic Camera Fibreglass, Ingubo yeFiberglass, Pu Camera fiberglass Ilaphu Ilaphu, Indwangu yeFiliclass Camera,